पोखरामा किन कम पानी पर्न थाल्यो ? मनसुनी समय नै बिजोग ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ भाद्र ३ गते मंगलवार ०८:१० मा प्रकाशित
देशकै धेरै पानी पर्ने जिल्लाले चिनिन्छ कास्की ।पोखरालाई नेपालको चेरापुञ्जीका रूपमा पनि लिइन्छ। जहाँ सबैभन्दा धेरै पानी पर्छ। तर अहिले अवस्था फरक भएको छ। यो पटकको मनसुनमा पोखरामा कम पानी परेको छ।
पोखरामा पानी पर्ने क्रम बर्षेनि घट्दो रहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराका प्रमुख राजाराम ढकाले बताएका छन् । उनको अनुसार अगस्ट महिनामा ९४० मिलिलिटर पानी पर्नुपर्ने हो। आधा समय गइसक्यो। अब यो लक्ष पुरा हुन भीषण वर्षात् हुनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसरी पानी आयो भने हुने क्षतिको आंकलन गर्न नसकिने ढकालले बताए ।’
अहिले देशका पश्चिमी र पूर्वी भागमा यसपटकको मनसुनमा अत्यधिक बर्षात् भइरहँदा पोखरा भने सुख्खा हुने अवस्थामा छ।पोखरामा पछिल्लो पाँच वर्षको मनसुनी रेकर्ड हेर्दा अवस्था चिन्ताजनक छ। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराको अनुसार रेकर्ड राख्न थालेको ५० वर्षयता पोखरामा सबैभन्दा कम पानी सन् २०१८ मा परेको थियो।
२ हजार नौसय ३४ मिलीलिटर मात्रै। नेपालमा औसत बर्षातको करिब ९० प्रतिशत मनसुनको बेला हुनुपर्छ। तर यो दर वर्षेनि घट्दो छ।
नेपालमा सामन्यतस् मनसुन सक्रिय हुने समय जुन, जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बर हो। यो वर्षको जुनमा पर्नुपर्ने भन्दा कम पानी पर्‍यो। ६६९ मिलिलिटर औसत पानी पर्नुपर्ने भए पनि जुनमा जम्मा ६०८.३ मिलिलिटर मात्रै पानी पर्‍यो। जुलाईमा पर्नुपर्ने भन्दा धेरै कम पानी परेको रेकर्ड छ। पर्नुपर्ने ९४० मिलिलिटर थियो तर ५४५ मिलिलिटर मात्रै पानी पर्‍यो। अगस्टको १९ दिनमा जम्मा १५५ मिलिलिटर पानी परेको छ। अगस्ट महिनाभरि पर्नुपर्ने ९४० मिलिलिटर हो। यो अनुमान पूरा हुन बितण्डा मच्याउने गरी पानी आउनुपर्ने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराका प्रमुख राजाराम ढकालले बताए।
सन् २०१५ को मनसुनका बेला जुन महिनामा जम्मा ५०६, जुलाईमा ९२३, अगस्टमा ६८१ र सेप्टेम्बरमा ७०२ मिलिलिटर पानी पर्‍यो। पोखरामा पानी पर्ने क्रम अस्वाभाविक घटबढ हुन थालेको धेरै भयो। पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुनकै समयमा झन् कम पानी पर्न थाल्यो। ‘पानी कम पर्न छोड्यो’, उनले भने, ‘यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्।
२०१६ मा कति पर्‍यो पानी ?
सन् २०१७ को जुलाई महिना बाहेक अरु महिनामा औसत भन्दा कम पानी परेको देखिन्छ। जुलाईमा भने औसत भन्दा धेरै पानी परेको छ। जुलाइमा ९४० पर्नु पर्नेमा १०७१ मिलिलिटर बर्षात भएको थियो। यस वर्षको जुनमा ४८२, अगस्टमा ६२०, सेप्टेम्बरमा ६१२ मिलिलिटर मात्र पानी परेको थियो।
पछिल्लो समय अतिबृष्टि र खण्ड बृष्टि धेरै हुन थालेको छ। २०१८ को तथ्यांक पोखराको पानीको तथ्यांक राख्न थालेको ५० वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा सबैभन्दा कम पानी २०१८ मै परेको देखिन्छ। यो वर्षको जुनमा ३७५, जुलाईमा ६३९, अगस्टमा ७०० र सेप्टेम्बरमा ७१२ मिलिलिटर मात्र पानी परेको थियो।